QGIS, PostGIS, LADM - Koorsada Maamulka Dhulka ee ay soo saartay IGAC - Geofumadas
Luulyo, 2017 cadastre, Featured, Geospatial - GIS, qgis
Isku soo wada duuboo dadaallada kala duwan, himilooyinka iyo caqabadaha ay Kolombiya la kulantay inay ilaaliso hoggaanka koorta koonfureed ee arrimaha geospatial, inta u dhexeysa Luulyo 27 iyo Ogast 4, Xarunta Cilmi-baarista iyo Horumarinta Macluumaadka Juqraafi - CIAF ee Machadka Juqraafiga Agustín Codazzi wuxuu horumarin doonaa Koorsada: Codsiga halbeegga ISO 19152 (Land Administration Domain Model) iyo adeegsiga luqadda INTERLIS ee qaab dhismeedka Macluumaadka Meelaha.
Caddayntu waa ka badan tahay cad, sababtoo ah Maamulka Dhulka waa arrin muhiimad sare u leh dalal badan, oo ay sababtay sababo kala duwan oo bulshada, dhaqaalaha iyo deegaanka ah. kaca technology ka sano ee 90 ballaarinaya kala duwan ee fursadaha in ay bixiyaan adeegyo cusub oo ka wanaagsan, waayo xogta da'ayeen iyo xuquuqda hantida, ka faa'iidaysanaya iman kara ee farsamooyinka isku xirnaanta, database-da'ayeen, software iyo qalabka. Cadaadiska tiknoolajiyadaan iyo baahida hay'adaha dawlada iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxay isku dheelitiraan isticmaalka heerarka; Qeybtan, qorshaha 2014 Catastro waxaa la abuuray sanadka 1995, iyo qayb ka mid ah waxtarkeeda ee ISO 19152 Standard ee sanadka 2012.
Dhowr waddan oo adduunka ah ayaa hadda raadinaya in ay hirgeliyaan LADM iyaga oo ka shaqeeya Cadastre, Diiwaangelinta Dhulka iyo Qalabka Macluumaadka Maareynta. INTERLIS waa luqad caddaynaysa in ay wax ku ool u tahay abuurista qalabka iyo hababka si loo fududeeyo wadashaqeynta iyo wareejinta macluumaadka geospatial.
Colombia waa mid ka mid ah dalalkaas, kaas oo ku jira isbedelka dib-u-habeeynta bulshada, kan sharciga ah iyo hay'adaha hay'adaha qorsheynaya in ay ka faa'iideystaan ​​kartida LADM-da ee u ah inay noqoto xariiqo ku-meel-gaadh ah oo loogu talagalay casriyeynta maaraynta dhulka. Waqtigaan, taariikhda qaranka, soo-jeedimaha loogu talagalay profiles iyo qalabka isticmaalka luqada INTERLIS ayaa la soo saaray.
macnahani xaq baahida loo qabo Agustín Codazzi Machadka midaynaysa gudahood ay dalab tacliinta kooras laga yaabaa in la heli karo si cilmiga dhulka xirfadlayaasha, ku lug leh heerar kala duwan oo wareeg ah ee maareynta dhul-in hab isku dhafan.
In dhamaadka waxaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay awoodiisa farsamo iyo fahamka in ka qaybgalayaasha, astaanta Data kaabayaasha dhaqaalaha iyo xad sare oo ah LADM maamulka dalka caadiga ah iyadoo la isticmaalayo luqadda INTERLIS si loo abuuro qalab iyo habab u sahlaya in ay korsato iyo fulinta.
Xaqiiqdii, koorsada kaliya maahan mid muhiim ah, laakiin sidoo kale waa mid xiiso leh sababtoo ah isku darka uu leeyahay inta udhaxeysa habka teori iyo jimicsi wax ku ool ah Muddadu waa 32 saacadood, afar maalmood gudahood ayaa loo qaybiyaa laba toddobaad (Khamiista iyo Jimcaha) waxaana lagu qaabeeyey saddex baloog:
Guud ahaan, oo ay ku jiraan fikradaha aasaasiga ah ee ku saabsan maamulka iyada oo diirada saaraya isbeddellada caalamiga ah iyo caqabadaha ka jira 2034 Cadastre, kaabayaasha xogta xogta, heerarka macluumaadka juqraafiyeed ee caalamiga ah iyo macluumaadka.
Qeybta labaad waxaa ku jira aasaaska fikradaha ee LADM, muuqaalka Kolombiya ee korsashada heerka ISO 19152 iyo kiisaska isticmaalka ee lagu dabaqay Cadastre, Diiwaanka Hantida iyo Qorshaynta Territorial. Sidoo kale balooggan waxay soo bandhigaan mabaadi'da luuqadda qaabeynta UML.
In block saddexaad ficil ahaan ka shaqeeya dhismaha model LADM a fududeeyey soo socda la soo jeediyay iyadoo la isticmaalayo INTERLIS ka kelmedo ay ka code ka, si ay u isticmaalaan qalabka sida UML Editor iyo ili2pg, oo qaab-dhismeedka data la dhisay aalada juqraafi PostgreSQL / PostGIS, Qarni xogta ee model la isticmaalayo a xogta QGIS plugin, dhoofinta, ansixinta iyo loading in uu soo bandhigo laga siladda meel.
Marka la soo koobo, waa dadaal xiiso leh in markan uu taageero ka haysto Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (SECO) ee Safaaradda Switzerland.
Post Previous" Hore Lagacna aad: 5 wax wanaagsan ee aad sameyn kartaa software CAD ah
Post Next Waxaan hayaa xogta LiDAR - hadda waa maxay?Next »
6 Jawaabo "QGIS, PostGIS, LADM - Koorsada Maamulka Dhulka ee ay soo saartay IGAC"
anton isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kusii jeedaa geofumadas waxaanan sugaa macluumaad kusaabsan koorsada maamulka dhulkaan.
Victor M. Bajo Perez isagu wuxuu leeyahay:
The koronto-in la horumariyo by Project ee casriyaynta maamulka Land ee Colombia, ee Xoghaynta Gobolka ee Arrimaha Dhaqaalaha (SECO), Dowladda Switzerland, soo socota si ay Canton ah Confederation ah, tan iyo Switzerland Isticmaal INTERLIS sida heerka isdhaafsiga iyo qaabaynta. Qalabku wuxuu noqon doonaa il furan, bilaash ah oo bilaash ah waxaana si xor ah loogu soo daabici karaa QGIS.
Waxaa loogu talagalay sixiddiisa xogta on Maamulka Land jawi aad u gaarka ah, ku dhisan model xogta ah (fasalada lug, xiriirka iyo caqabadaha ku soo rogay) in ay dhacdo Colombia, LADM-Col, la kaas oo dhisa jawiga qaabeynta, ka dibna bixinaya interface kaas oo sahlaya wax-qabadka iyada oo ku saleysan baahida tusaalaha. Wuxuu kaloo ka shaqeeyaa ansaxinta iyo jawiga badalashada xogta.
Samuel Mesa isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dhegeysiga, tan waa la heli karaa si xor ah, maaddaama aad kala soo bixi karto oo aad iskudaysiin kartoonka
IGAC waxay qorsheyneysaa inay u weeciso dhanka koorsada dhexdeeda tababarka. Sidii la ii sheegay, dhawr bilood gudahood waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba madal ah.
Waxaan soo jeedinayaa in aan ka warqabo waxa ay ICDE daabacayso
david fernando urrelo isagu wuxuu leeyahay:
Sidaa si la mid ah ayaan xiiso u qabaa laakiin qaab wanaagsan, oo ka socota Bolivia. dfernando.urrelo@gmail.com
Carla isagu wuxuu leeyahay:
Wanaagsan, samee nooc ka mid ah daabacaadda koorsada, waxaan ka socdaa Argentina waxaan xiiseynayaa mawduuca